Ventura Oo Laga Ceryrinayo Azzuri Iyo Ancelotti Oo Bedelkiisa Ahi
Friday, October 19th, 2018 - 15:07:37
Monday November 13, 2017 - 09:03:30 in Wararka by Hussein Hadafow
Xiriirka kubadda cagta Italy ayaa laga yaabaa inay ceyriyaan macalinka lagu magacaabo Giampiero Ventura xitaa hadii ay u soo baxaan Koobka Aduunka,waxaana jiro macalimiin badan oo lala xariirinaayo in ay ay bedelaan.
Macalimiinta kala Carlo Ancelotti, Antonio Conte iyo Gigi Di Biagio ayaa laga yaabaa in midkood uu noqdo macalinka xiga ee Azzuri.
Xulka Azzurri ayaa lugta hore ee kulanka kala baxa oo ay Sweden la ciyaareen looga badiyay 1-0 kulan ka dhacay magalada Solna,waxaana la eegi doonaa sida uu noqdo go'aanka xiiriirka kubda cagta Talyaaniga kadib habeenka Isniinta ee ay San Siro ku ciyaarayaan.
Inkastoo macalin Ventura uu qandaraaska u kordhiyay Azzuri ilaa sannadka 2020, waxaa jira warar sii kordhaya oo tibaaxaayo in xitaa uu tigidhka Ruushka u jaray xulkiisa la ceeyrin doono.
Wargerysyada kala ah La Stampa iyo Gazzetta dello Sport ayaa sidoo kale soo daabacay in Ancelotti uu aqbali doono in uu aqbalo booska macalinimo Azzuri madaama uu haatan yahay shaqo la’aan dib markii Bayern Munich laga eryay.
Inkastoo tababarihii hore ee PSG, Real Madrid iyo Chelsea uu sheegay in uu doonayo in uu qaato nasiino inta ka dhiman xilli ciyaareedka, laakin dalkiisa oo aad u murugeysan ayaa laga yaabaa inuu bedelo maskaxdiisa.
Kala duwanaansho kale ayaa noqon lahaa soo laabashada Conte ee Azzuri kaasoo ka tagay qarankiisa ka dib Euro 2016, isagoona qabtay kooxda Chelsea.
Fursada ugu badan ee laga yaabo in Ventura uu sii ahaado macalinka Azzuri ayaa mugdi galay hadii xitaa ay soo baxaan waxaana kaloo aad loo farmuuqayaa in Gigi Di Biagio oo ah macalinka xulka 21 jirada Talyaaniga in isagana uu qabto shaqadaa.
W/D Abdirashiid Qanciye.